Izizathu Zokuthi Kungani Ungafanele Ukusingatha Ividiyo Yakho | Martech Zone
Izizathu Zokuthi Kungani Ungafanele Ukusingatha Ividiyo Yakho
NgoLwesibili, Agasti 12, 2014 ULwesibili, May 3, 2016 Douglas Karr
Iklayenti elenza umsebenzi omangalisayo ohlangothini lokushicilela futhi libona imiphumela ehlukile libuze ukuthi uthini umbono wami ngabo ngokusingathwa kwamavidiyo abo ngaphakathi. Babona sengathi bangalawula kangcono ikhwalithi yamavidiyo futhi bathuthukise nokwenza kwabo usesho.
Impendulo emfushane ithi cha. Akusikho ngoba angikholwa ukuthi bazokwazi ukwenza kahle kuyo, yingoba babukela phansi zonke izinselelo ezinhle zevidiyo esingethwe esivele ixazululwe kwenye indawo. I-YouTube, Vimeo, Wistia, I-Brightcove, nezinhlobonhlobo ze Ukuphathwa kwefa ye-Digital izinkampani sezivele zisebenze ngezingqinamba eziningana zevidiyo esingethwe:
Ama-bandwidth Spikes - ngaphezu kwanoma isiphi isayithi lokuqukethwe, ama-spikes we-bandwidth ayinkinga enkulu ngevidiyo. Uma enye yamavidiyo akho yenzeka igciwane ... akuyona inkinga elula futhi ungahle udinge izikhathi eziyi-100 noma ngisho nezikhathi eziyi-1000 umkhawulokudonsa ukuhambisana nokufunwayo. Ungacabanga ukuthi ekugcineni uthola ividiyo yakho lapho bese umdlali wawo wonke umuntu eqa futhi emile njengoba bezama (futhi belahla ukudlala)?
Ukutholwa Kwedivayisi - amapulatifomu wokusingathwa kwamavidiyo wefu azobona ukuxhumana kwakho nendawo yokubuka ukuze ukwandise ikhwalithi yevidiyo kubabukeli bakho. Lokho kunikeza isipiliyoni esihle kakhulu somsebenzisi kubasebenzisi abaxhumeka ngokushesha kakhulu noma ukuxhumana okuhamba kancane ngokufanayo. Akugcini nje ngokuqinisekisa ukuthi ividiyo isakazwa ngokushesha okukhulu, iphinde inciphise ukusetshenziswa komkhawulokudonsa wakho.
Izici Zomdlali - ikhono lokwengeza izindawo ezishisayo, amafomu, ukubizelwa ezenzweni, ama-tickers, ama-intros, ama-outros… uhlu lwezinto ezifakiwe kubadlali abasatshalaliswayo luyakhuphuka ngoba amapulatifomu wevidiyo abanjwe anamaqembu wonke wabathuthukisi abasebenza ukuthuthukisa izinzuzo zalezo zingxenyekazi nsuku zonke. Izinkampani zivame ukubheka ukusingathwa kwamavidiyo njengephrojekthi lapho zikubheka khona ohlwini bese ziqhubekela phambili… kepha lobu ubuchwepheshe obudinga ukuthuthukiswa nokugcinwa okuqhubekayo njengoba amadivayisi eshintsha, ukufinyelela kuzinguquko ze-bandwidth, kanye nokuthandwa kwezici kuyashintsha. Izinkampani zizohlala zingemuva lapho zizama ukuthuthukisa lokhu ngaphakathi endlini.
I-Cross-Site Analytics - ngubani oshumeke umdlali wakho? Kubukwa kuphi? Inemibono emingaki? Abukelwa amavidiyo wakho isikhathi esingakanani? Ividiyo analytics inikeza ukuqonda okungakholeki kokuthi abasebenzisi bawasebenzisa kanjani lawo mavidiyo, noma ngabe bathatha isenzo ngokususelwa kuwo noma cha. Njenganoma yikuphi okunye okuqukethwe, analytics kubalulekile ukulungisa isu lakho lokuqukethwe futhi ulisebenzisele izethameli zakho.
Search injini - Kuningi okulotshwe ngakho nokwenza kahle kwevidiyo vele… kodwa okusemqoka kokutholakele kwethu ukuthi izinjini zokucinga azilindeli, azincomi, noma zinikeze inzuzo ezinkampanini ezisingatha ividiyo yazo. Ngenkathi ukuthandwa kwevidiyo kuzosizakala ngokukwazi kwayo ukukala, ividiyo eshumekiwe esekhasini elinombhalo nezithombe ezisekelwayo izolinganiswa, futhi uma kungengcono, kunekhasi levidiyo okuyiwa kulo. I-Case in point yi-Youtube. Sinamakhasi akulesi sayithi anamavidiyo we-Youtube ashumekiwe asezingeni elingcono kunekhasi le-Youtube ngoba alungiselelwe ngokuqukethwe okusekayo.
Isebenza Kanjani Ukusingathwa Kwevidiyo
Buka ividiyo emfushane evela eWistia ukuthi ukusingathwa kwamavidiyo kusebenza kanjani kokuthunyelwe kwethu.
Amapulatifomu wokusingathwa kwamavidiyo anezinye izinto eziningi, kufaka phakathi isitoreji esingahlukaniseki, ukuhlanganiswa namapulatifomu wokuphatha amaphrojekthi, ukushicilela kwamanye amapulatifomu evidiyo, ukukhiqiza okuphakelayo kwevidiyo kokubhalisela nokufaka kumathuluzi wenkampani yangaphandle (njengezinhlelo zokusebenza zeselula), ukubhala ngekhodi okuzenzakalelayo, imibiko ethunyelwe nge-imeyili, kuyasesheka imitapo yolwazi, ukumakwa kwamavidiyo nokuhlukaniswa ngezigaba, ukudalwa kwezithonjana zevidiyo, kanye nekhono lokuphusha izaziso zokushicilelwa kumanethiwekhi wakho omphakathi. Lezi yizo zonke izici ezingadinga ukwakhiwa kabusha uma ufisa ukusingatha endaweni yangakini - lowo ngumsebenzi omningi.
Njengoba i-Youtube iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu, noma ngabe ngisebenzise insiza enesidlali nekhwalithi engcono, bengisazokwamukela futhi nokwandisa ividiyo yami ku-Youtube, Engeza ukuloba kwevidiyo ukuze uqoqe okuqukethwe ekhasini lakho levidiyo bese uqinisekisa ukuthi kutholakala!
Ngamafuphi, angiluleki abantu ukuthi bamba amavidiyo abo. Nginesiqiniseko sokuthi ukusilela emuva kwamaphrojekthi abhekene nezinkampani eziningi uma kukhulunywa ngentuthuko nobuchwepheshe kuyinto ende. Gxila ku-bailiwick yakho. Ukuthatha isikhathi sokuphinda lokho abanye abasebenza nsuku zonke akunangqondo. Ngenkathi izindleko zehlile futhi ubuchwepheshe buthuthukile ukwenza i-BYO (yakha eyakho) kungenzeka, kusekhona isisekelo esihambayo ezimbonini eziningi. SIYALELA izinkampani ukuthi zakhe ubuchwepheshe ngaphakathi uma kunengqondo - ukuhlanganiswa nabahlinzeki abavela eceleni lapho kunengqondo khona.
Ividiyo iqhuma ngokuthandwa njengamanje… ukunamathisela kumhlinzeki wefu we-SaaS ozinikele ekuthuthukiseni ulwazi ngezinsizakusebenza eziningi kuyindlela efanele yokuhamba… namuhla.
Tags: isibaniividiyo yebhizinisiividiyo ephethweukusingathwa kwevidiyoanalytics videoizindleko zevidiyoizici zevidiyoukubamba ividiyoizici zesidlali sevidiyoividiyo seovimeoWisdomtiayoutube
I-World of Social Media Monitoring kanye ne-Analytics
Aug 17, 2014 ku-8: 44 AM
I-athikili enhle, ngithanda indlela oyichaze ngayo!